Maxay Dalayntu Qoraalka Tartaa? - AGA - Akadeemiya Goboleedka AfSoomaaliga
Home Barnaamijyo Cilmi Baaris Maxay Dalayntu Qoraalka Tartaa?
Maxay Dalayntu Qoraalka Tartaa?
Qofku marka uu hadlayo hadalkiisa si habaysan ayuu u soo gudbiyaa. Sidaas oo kale, waa in qoraalkana habsami loo qoraa. Waxyaabaha erayada ka baxsan, ee ka qayb qaata gudbinta macnaha, iyagoo calaamado ah, waa in lagu daraa qoraalka. Taas ayaana loo yaqaanaa dalaynta ama astaamaynta qoraalka, ama “punctuation” “علامات الترقيم”.
Aalaaba qofku marka uu hadlayo waxaa macnaha kaaba luuqda codka, neefsashada (aamusyar), dareenka wejiga iyo dhaqdhaqaaqa ay xubnaha jirku samaynayaan. Dalayntu waa isku day ah in arrimahaas lagu muujiyo astaamo la isla yaqaan.
“Dalaynta qoraalku” waxay taabbagelisaa helidda akhris sax ah, faham sax ah, iyo, sidoo kale, qurxinta qoraalka. Bal is barbardhig macnaha ay gudbinayaan labadan weerood:
Tus1: Cali, Axmed walaalkii, ayaan arkay.
Tus 2: Cali Axmed walaalkii ayaan arkay.
Waxaa la arkay waa laba qof oo kala duwan, waxaana kala duway hakadka ku jira.
Astaamaha qoraalka loogu adeegsiga badan yahay waxaa ka mid ah:
Waxaa la adeegsadaa marka weertu dhammaato, caadina tahay; sida:
Faarax waxa uu dhegaysanayaa idaacadda.
2. Calaamadda Su`aasha( ? )
Waxaa la adeegsadaa marka ay dhammaato weer-su`aaleed, sida:
Ma aragta yqalinkaygii?
3. Calaamadda Yaabka( ! )
Waxaa la qoraa marka lagu dhawaaqo hadal yaab ku jiro, ama filanwaa ka muuqdo; sida:
Alla, qurux badanaa surwaalkani!
4. Hakad ( , )
Hakadka waxaa la adeegsadaa weedha dhexdeeda, si loo kala sooro ama loo kala saaro erayo ama oraahyo weedha dhexdeeda ah; sida:
Waxaa yimid Cali, Faarax, Geeddi iyo Caasho.
Qalin cusub, oo cas, ayaan soo gatay.
Haddii aad soo habsaantid, waan kaa tegayaa.
Fadlan, koob shaah ah ii shub.
Haddii ay kaa murugto meesha ku habboon hakadka, waxaad kaalmaysataa inaad qoraalka kor u akhrido; meesha aad neefsato ayuu hakadku gelayaa!
5. Joogsi Dhiman ama hakad culus ( ; )
Waxaa loo adeegsadaa asteeyaa meel macnuhu buuxsamay, welise weertu aanay xirmin; sida:
Cali waxa uu sitaa shaati duug ah, oo cas; surwaal Jiinis ah, oo cadaaday; iyo taleefan cusub, oo qaali ah.
6. Laba Dhibcood( : )
Waxaa loo isticmaalaa in la qeexo waxyaabo taxan oo dheer, sida:
Dhismahan waxaa wada degan kulliyadaha: culuumta siyaasadda iyo warbaahinta, caafimaadka, injineeriyada iyo waxbarashada.
7. Kolmaha Xigashada ( “ ” )
Calaamadda nwaxaa loo adeegsadaa soo-guurinta hadal kale, sida:
Cabdi hore ayuu u yiri: “horumarku, dadaal iyo cilmi ayuu u baahan yahay”.
Astaamaha ka sokow, xeerarka qoraalka waxaa loogu isticmaal badan yahay xarfaha waaweyn.
8. Xarafka Weyn (Capital Letter)
Xarfaha waaweyn waxaa loo isticmaalaa meelo ay ka mid yihiin: bilowga weerta; magacyada gaarka ah ee qof, dal, qabiil, gobol, bil, maalin iwm; sida:
Cali waa Soomaali degan Mombasa ee dalka KiIniya; wuxuuna dhashay bisha Maarso maalin Sabti ah.
Inkasta oo dalayntu muhiim tahay, haddana waxaa dhacda in dadka qaarkiiis ka fududaystaan. Dalaynta oo la khaldaa, waxay dhaawici kartaa macnaha qoraalku gudbinayo; qoraagana waxay ku tahay ceeb iyo dhaliil ay tahay inuu ka dhowrsado.
W.Q. Bare Sare